मन्त्री भट्टराईको सचिवालयमा पूर्वमाओवादी पनि | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
रोल्पामा लगानी सम्मेलन : के–के भए प्रतिबद्धता ?
access_time40 minutes ago
मन्त्री भट्टराईको सचिवालयमा पूर्वमाओवादी पनि
access_time२०७६ साल भाद्र २२ गते, आईतवार ०२:११ PM chat_bubble_outline Comments folder_open राजनीति
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सचिवालय बनाउँदासमेत पार्टी एकतालाई पुष्ट्याईँ व्यवहारमा उतारेका छन् ।
सामान्यतः यसअघि प्रधानमन्त्री होस वा मन्त्री भएकाहरुले आआफ्ना पूर्वपार्टीका बाहेकलाई स्थान दिएका छैनन् । तर, मन्त्री भट्टराईले भने पूर्वमाओवादीलाई समेत समेटेका छन् ।
पूर्वएमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको सचिवालयमा कोही पनि पूर्वमाओवादीका छैनन् । त्यस्तै पूर्वएमालेबाट मन्त्री भएकाहरुको सचिवालयमा कोही पनि पूर्वमाओवादीका छैनन् ।
त्यसैगरी, पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री भएकाहरुले पनि पूर्वएमालेबाट कसैलाई पनि सचिवालयमा राखेका छैनन् । तर, मन्त्री भट्टराई आफू पूर्वएमालेका भएपनि पूर्वमाओवादीलाई समेत समेटेका छन् । यो कार्यले नेकपाको कार्यकर्ता बृत्तमा सर्वत्र प्रशंसा भएको छ ।
मन्त्री भट्टराईले पूमुख स्वकीय सचिवमा प्रेम गुरागाईँलाई राखेका छन् । उनी पूर्वएमालेका हुन् । त्यस्तै, पूर्वएमालेका सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष सन्तोष मादेन र पूर्वमाओवादीका सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष निङ्मा डण्डु लामा सचिवालयमा राखेका छन् ।
हुन त मन्त्री भट्टराईले मन्त्री हुनासाथ पूर्वमाओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेर शहीदहरुलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको कार्यले पनि प्रशंसा पाएको छ । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुका साथै सबैसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छन् ।
सूचना सम्प्रेशणको नाममा व्यक्तिगत दृष्टिकोण सम्प्रेशण नगर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह
जनजातिलाई गृहमन्त्रीको अपील : सार्वजनिक विदा पुनर्स्थापनाका लागि सडक संघर्ष गर्नुस्
बामदेवको राष्ट्रियसभा यात्राले नेकपा ‘हाइकमाण्ड’मा हंगामा, अन्यौलमा सचिवालय निर्णय !
पुस्तकको बिक्री व्यापार भएकाले कर हट्दैन : मन्त्री खतिवडा
सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणका पर्दा पछाडिका पात्र पत्ता लगाउनुपर्छ : सांसद पौडेल